निर्माण व्यवसायिको लापरबाही बढ्यो, देशभर झण्डै २ सय पुल समस्याग्रस्त « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
निर्माण व्यवसायिको लापरबाही बढ्यो, देशभर झण्डै २ सय पुल समस्याग्रस्त
२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ००:००
सडक विभागका अनुसार हाल देशभर निर्माणाधीन पुलमध्ये १८४ पुल समस्याग्रस्त बनेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीकै कारण पुल निर्माणमा सबैभन्दा बढी ढिलाइ हुने गरेको सडक विभागले जनाएको छ । स्थानीय सडकमा १२८, रणनीतिक सडकमा ४३ पुलमा समस्या देखिएको छ । कहिलेकाहीँ प्रक्रियागत तथा मौसमलगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको सडक विभाग, पुल महाशाखाले जनाएको छ ।
निर्माणाधीन पुलमध्ये ९६ पुल निर्माण व्यवसायीका कारण ढिलाइ भइरहेको छ । तीमध्ये कतिपयलाई कारवाहीको प्रक्रिया शुरु भइसकेको त कतिको शुरु गर्ने चरणमा रहेको महाशाखाका प्रमुख दीपक भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, निर्माण व्यवसायीले गलत मनसायले ढिलाइ गर्दा कारवाही हुने भए पनि अरु समस्याका कारण ढिलाइ हुँदा अवधि थप गर्दै आइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका सडक आयोजनाअन्तर्गतका पुलमा पनि समस्या देखिएको छ । हुलाकी राजमार्गमा नौ पुलमा समस्या देखिएको छ । ६० सडक पुल निर्माणाधीन छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गमा अहिले १५ पुल निर्माण अघि बढेको छ । ती मध्ये चार पुल निर्माण व्यवसायीका कारण अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।
रणनीतिक सडकमा १४० तथा स्थानीय सडकमा ५०० पुलको निर्माण अघि बढेको छ । स्थानीय पुल ६४ र रणनीतिक पुल तीन वटाको डिजाइन सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: Feb 14, 2020
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका सि.डि.ई. सुरेशकुमार शर्माविरुद्ध पदको दुरुपयोग गरी अकुत
सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको
सरकारले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार
आज थप १९११ जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमित ७९,७२८ पुगे
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १९११ जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। जसमध्ये पछिल्लो २४ घण्टामा
लोकसेवाको परीक्षा नै सञ्चालन गर्ने नक्कली इन्सपेक्टर पोशाकसहित पक्राऊ
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले आज बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी नक्कली प्रहरी निरीक्षकलाई पोशाकमै पक्राउ गरेको